Toilet Seat, Sport chibooreso, Plastic Toilet muvharo - Haorui
Hebei Haorui International Kutengesa Co., Ltd.
Mitambo Uye Hutano
Mukati uye Kunze
Anoda kusvika makore makumi maviri, HAORUI inochengetedza kubatana kwenguva refu pamwe nesupamaketi huru inotungamira yeEurope, seLIDL, ALDI, EDEKA, NORMA, NETTO, ROSSMANN zvichingodaro. garandi. Ikozvino HAORUI inonyanya kubata mumatatu makuru eboka rezvigadzirwa - Zvimbudzi zvinhu, Zvemitambo & Hutano zvigadzirwa, Matanda Ematanda.
Zorora hupenyu hwako
Zuva rakanaka rinotangira pano. Zvinhu zvedu zvakasiyana-siyana zvekugezera zvichaita kuti imba yako yekugezera ive yakachena uye ive nyore. Zvinhu zvakasiyana uye magadzirirwo anoratidza hunhu hwako hwakasiyana. Zuva rakabatikana rinopera pano. Hwakavimbika hunhu kuzvipira kwedu kusingachinji. Chitarisiko chakanaka uye chigadzirwa kunzwa kunatsiridza manzwiro ako. Ndapota zorora panguva ino.
Kubva pane kushandiswa kwezuva nezuva kusvika kumitambo yehunyanzvi uye kushandiswa kwekurapa, timu yedu inogona kupa dhizaini zvichienderana nezvinodiwa zvako chaizvo zvezviitiko zvakasiyana uye kushandisa chinangwa: Kudzivirirwa kwemitambo yezvikamu zvakasiyana zvemuviri, ruoko rwekudziya uye kumanikidza, jira rinoshanda uye shinda dzinopa kuita kwakakosha, tsoka hanya, kutonhora & kupisa kurapwa, Orthopedics uye rubatsiro rwekurapa ... Ita sarudzo yako zvakasununguka, uye isu tiri kumusana kwako.
Pfumisa hupenyu hwako
Matoyi ematanda anopa vana raiti risina chinhu ravanogona kuratidzira husango hwese nekuwedzeredza kwekufungidzira kwavo kuri kuwedzera; Matoyi ematanda anogona kukurudzira kubatana nevamwe vana uye kukurudzira kugovana pamwe nekubatana. Matoyi ematanda zvakare anoratidza kubatana chaiko kune zvakasikwa nyika zvevana ... Tose edu emavara matoyi matoyi anogona zvirokwazvo kunatsiridza iwe nemhuri yako hupenyu.
Hebei Haorui Kubatsira
Heano mashoma zvikonzero nei iwe uchisarudza Hebei Haorui
Gadzira zvigadzirwa mumabasa akasiyana siyana uye dhizaini zvinoenderana nezvinodiwa chaicho zvevatengi vese.
Shanda maitiro ese ehurongwa hwese kubva kubvunzurudza kusvika kumudziyo kurodha Inopa mutengi yakazara uye yakatarwa sevhisi.
Dzidza zvakawanda nezve HAORUI
Wongorora uye tarisa maitiro ese ekugadzira, Simbisa zvinhu zvakununurwa mumamiriro akanakisa.
HAORUI ine zvitupa zvakakwana uye yekuyedza manejimendi sisitimu, shandira pamwe nevakaroora ve3th bato institution uye labs-SGS, BV, Hohenstein, TUV, Intertek zvichingodaro. neinowanikwa BSCI, SEDEX, ISO, FDA uye Oeko-tex, GS, CE, PEFC, zvitupa zveFSC, kuvimbiswa kwemhando yepamusoro huzivi hweHaorui kune bhizinesi rese.